Ciyaarihii ugu dambeeyay ee bilaashka ah ee Android - Sii deynta, Faallooyinka, Xeeladaha | Androidsis (Bogga 5)
Farshaxanka "flabby parkour" ee ka imanaya Human: Fall Flat oo hadda laga heli karo Play Store
Bini'aadamka: Fall Flat waa ciyaar cusub oo qiimo leh oo loogu talagalay Android oo xoogga saareysa fiisigiska walxaha kaas oo lagu qaato daqiiqado xiiso leh.
Waxaan bixinaa Aargudashada Boqortooyada Rush: oo la iibiyo 7 maalmood oo ah € 3,19
Boqortooyada Rush aargoosiga ayaa ah tii afraad ee taxanaha Boqortooyada Rush oo ka socota Studiohyada Ironhide. Difaac munaarad sifiican loo fuliyay.
Ka badbaadi buundada kulankan xiisaha leh ee loogu magac daray Badbaado Buundada
Ka Badbaado Aroosadda waxay ku dhigeysaa gaariga iyo buundada ay tahay inaad ka gudubto waqtiga ugu yar ee suuragalka ah ka hor intaadan dhiman.
Hadda waad iska qori kartaa manga The feed of the North Star on Android
Feedhka North Star waa ciyaar cusub oo dagaal oo ku saleysan gebi ahaanba manga taas oo caan ka ah meeraha oo dhan.
Ka ogow wax badan oo ku saabsan dakhliga Harry Potter: Wizards Unite oo la soo saaray maalintiisii ​​ugu horreysay ee la sii daayay Mareykanka iyo Ingiriiska.
Dhimasho by Daylight ayaa sanadkan bilaabay Android
Ka ogow wax badan oo ku saabsan daahfurka Dead By Deadlight ee moobilada, sida ay horayba shirkaddu u shaacisay.
Harry Potter: Wizards Unite waxaa hadda laga heli karaa Spain iyo dalal badan: ugaarsiga ugaarsiga oo la soo celin karo!
Harry Potter: Wizards Unite waxaa lagu sii daayay liis badan oo dalal ah waxaadna hadda qaban kartaa ushaada si aad wadooyinka u garaacdo.
Noqo taliyihii ugu dambeeyay ee Medieval Japan ee Shogun's Empire: Taliyaha Hex
Dagaallada qabiilka ee gobollada waxaa lagu muujiyey Boqortooyada Shogun: Hex Taliyaha sida ugu wanaagsan ee ugu wanaagsan ee ciyaarta moobiilka.
Waad salaaman tihiin dhamaan geesiyaasha taageerayaasha caajiska iyo dagaalka tooska ah
Hello Hero All Stars waa ciyaar kale oo freemium ka badan oo leh RPG iyo dagaalkaas otomaatiga ah ee dad badani necbaa oo qaar jeclaaday.
Sida oo kale waxaad tahay Indiana Jones oo karbaashkiinu uu ku diyaar yahay lafaha Alabama
Haddii aad ka heshay Indiana Jones Macbadka Qiyaamaha, ma seegi kartid ballanta lafaha Alabama, ciyaar farshaxan pixil ah oo leh sababo kugu filan oo aad uga adkaan karto.
Valve wuxuu ku galayaa Android barnaamijka 'Dota Underlords' weyn iyo iskudhafkiisa badan
Valve wuxuu ku yimaadaa qaababka ugu wanaagsan ee loo adeegsado Android iyada oo loo marayo Dota Underlords, cinwaan cusub oo aan ka tagi doonin qofna aan dan ka lahayn oo moobilkaaga ugu badnaan qaadanaya
Sida loo helo Harry Potter: Wizards Unite si dhakhso leh ayey u shaqeeyaan maalinta la soo bandhigayo
Maalinta la bilaabayo Harry Potter: Wizards Unite million ayaa ciyaari doona, khiyaanadan waxaad ku hagaajin kartaa waxqabadka maalintaas.
La dagaallama seeftaada iyo waxa aad ku heli kartid madaddaalada iyo xaragada Knight Brawl
Knight Brawl waa ciyaar xamaasad leh, qalbi-furan oo madadaalo leh halkaas oo aad qarax kula yeelan karto hubkeeda alwaax iyo koofiyadaha daasadaha.
Bini'aadamka: Fall Flat's Ujeeddada Fiisigiska Imaanaya Android 26-ka Juun
Maalmo gudahood waxaad awoodi doontaa inaad qabato Bini'aadamka cusub: Fall Flat ee ka yimaada kombuyuutarka si aad isugu daydo inaad boos uga sameysato ciyaaraha moobiilka.
Harry Potter: Wizards Unite wuxuu bilaabmayaa Juun 21 ee Android
Harry Potter: Wizards Unite waxaa loo heli doonaa Mareykanka iyo Boqortooyada Midowday si marka ugu dhaqsiyaha badan looga heli doono dalalka kale.
PUBG Mobile waxay fududeyn doontaa helitaanka dharka run ahaantii qabow
Tag kaydinta dhibcaha BP, maxaa yeelay hubaal waxaad awoodi doontaa inaad hesho dacwooyin ka wanaagsan kuwii aad ka heshay PUBG Mobile maanta.
Pokémon GO wuxuu joojin doonaa ka shaqeynta boosteejooyinka Android 4 KitKat
Markii Pokémon GO uu suuqa ku dhuftay 3 sano ka hor, waxay noqotay kacaan adduunyada ciyaaraha fiidiyowga ...
Dr. Mario World wuxuu imanayaa Android bisha July 10
Nintendo ayaa hadda si rasmi ah u shaacisay daahfurka Dr. Mario World, sharadka cusub ee Nintendo ee qalabka mobilada
HELI 100 waxay ka timaadaa abuurayaasha PAKO si ay u xakameeyaan helikabtarka arcade-ka xawaaraha sare ku socda
HELI 100 waa midda cusub ee abuureyaasha PAKO, ciyaarta gawaarida ee hadda u socota cirka oo leh helikabtarrada iyo shisheeyaha.
Haddii aad raadineysay ilbiriqsi asal ah oo balwad leh, waxaad ka heshay: Mosaic BlipBlop
BlipBlop waa wadar dhan ujeeddooyin loogu talagalay ciyaarta ugu fudud ee abid abid la abuuray. Waxay kaa yaabi doontaa shaki la’aan shaki la’aan.
Orod, Conan, Orod iyo inbadan oo ka mid ah kulankiisii ​​ugu horeeyay ee Detective Conan Runner: Race to the Truth
Dambibaare Conan Runner: Tartanka runta ayaa ah Jetpack Joyride oo ah orodyahan aan dhammaad lahayn, gacmo badan iyo waxyaabo badan oo xiiso leh.
Wicitaanka Waajibaadka: Mobilka hadda diyaar ayaa loogu soo dejisan karaa iyadoo ku saleysan xaddidan
Daahfurka PUBG iyo Fortnite oo laga helay moobillada ayaa bilow u ahaa nooc cusub oo ciyaarta ah: Dagaal ...
Battle Blobs iyo 3v3 oo ay ku wada ciyaari karaan khadka tooska ah ee a la Nintendo's Splatoon
Battle Blobs waa imaatin dhab ah oo loogu talagalay multiplayer khadka tooska ah ee ciyaaraha 3v3 oo ujeedkiisu yahay inuu noqdo mid ka mid ah dareenka sanadka.
Boom Pilot waa duuliye diyaaradeed oo caadi ah kaas oo aad ku qaadatid aalado khaldan
Ciyaar sifiican u horumarsan oo kugu qaadeysa inaad wajihi karto aalado Boom Pilot ah. Haddii aad rabto madadaalo matamarciano caadi ah, waxay qaadataa waqti.
1945 Ciidamada Cirka waa dib u soo noqoshada quraafaadkii 1943 iyo in ka badan oo ah CAPCOM
Haddii wakhti kasta oo aad ku raaxeysato CAPCOM 1943, oo ay la socoto 1945 Ciidamada Cirka waxaad yeelan doontaa qayb ka mid ah intaas iyo in ka badan adoo awood u leh inaad kaga ciyaarto moobilkaaga.
Diiwaangelin hore oo loogu talagalay Dhibaatooyinka Dagaalka: Nightwar laga bilaabo Ciyaaraha Gacanta ayaa hadda la heli karaa
Dhibaatooyinka Dagaalka: Nightwar horeyba waxay u laheyd boggeeda hore ee diiwaangelinta ee Play Store waxaadna arki kartaa fiidiyoow waxa noqon doona ciyaar qiimo leh.
Waxyaabaha Shisheeyaha waxay lahaan doonaan ciyaar dhab ah oo la kordhiyay oo loogu talagalay Android
Ka ogow wax badan oo ku saabsan daahfurka ciyaarta Shisheeyaha Waxyaabaha loogu talagalay Android iyada oo ku saleysan xaqiiqda la kordhiyay ee si rasmi ah loo bilaabi doono 2020.
Cusbooneysiinta Mobile-ka ee PUBG 0.13.0 hadda waxaa lagu heli karaa qaabka dhimashada cusub iyo wax badan oo dheeri ah
PUBG Mobile waxay heshaa cusbooneysiinta 0.13.0 ee Godzilla, qaab cusub oo dhimasho ah iyo liis weyn oo isbeddello ah oo aadan seegi karin.
Dhawaqa bam-gacmeedka dhawaanta ayaa hadda laga heli karaa Fortnite
Hubka cusub ee hadda laga heli karo Fortnite waa soo dhawaanshaha bam gacmeed, oo awooddiisu tahay 2 bam gacmeed isla markaana leh waqti lagu shubanayo oo ah 3 ilbidhiqsi.
PUBG Mobile wuxuu noqdaa ciyaarta dhalisa dakhliga ugu badan
Raadi wax badan oo ku saabsan dakhliga milyaneerka ah ee PUBG Mobile ay ku soo saarto labada Android iyo IOS halkaasoo ay guul ku tahay dadka isticmaala.
Bisaddii ugu daryeel la'aanta badnayd waxay la soo noqotaa Talking Tom Hero Dash
Kahadalka Tom Hero Dash ayaa ah waxa cusub ee ku saabsan bisadda madadaalada ah ee ku soo dhacda Android iyada oo si fiican loo shaqeeyay loona soo saaray orodyahan aan dhammaad lahayn.
Daabacaadda dib-u-habeynta ee Final Fantasy Crystal Taariikhda jiilaalka ee Android
Final Fantasy Crystal Chronicles wuxuu sidoo kale imaan doonaa Android dhamaadka sanadka sanadkaas noocaas weyn ee dib loo cusbooneysiiyey ee taleefannada gacanta.
Stadia waxay lahaan kartaa rukumo gooni ah liisaska kale
Ka ogow wax badan oo ku saabsan ciyaaraha bilaashka ah ee 'Stadia', oo lagu daray awoodda aad ku heli karto rukhsado gooni ah oo ku yaal liistooyinka kale.
Tani waa ciyaarta Bethesda ee soo socota ee loogu talagalay Android: soo noqoshada Taliyaha Keen
Taliye Keen waa ciyaarta soo socota ee Bethesda waxayna durba heshay jawaab celin runtii aad u xun oo ka timid taageerayaasha horraantii 90-meeyadii.
Hadda waad iska diiwaan gelin kartaa nooca ugu quruxda badan ee Gears of War with Gears POP!
Gears POP! Dhawaan ayey u imaan doontaa Android si ay ugu labistaan ​​jilayaasha aad jeceshahay ee ka socda 'Gears of War saga' sida Funko Pop ee mobilkaaga.
Boot Boop Bots waa xujo xiiso leh oo aad ku maamusho laba aalado yaryar
Beep Boop Bots wuxuu kaa qaadayaa inaad xakamayso laba aalado isku mar ah si aad uga caawiso inay dhammaystiraan heerka oo markaa u gudbaan taxane wanaagsan oo iyaga ka mid ah.
Badbaadiyaha Cadhada: Pixel Z iyo markay zombiesyadu qabow yihiin oo ay naga helaan inaan si habboon u caayo
Ka badbaaday Cadho: Pixel Z waxay kugu noqotey mid layaab leh inaad ku dhex wareejiso adduun aakhiro ah oo aan wax lacag ah lagu soo oogin, heerarna ... toban.
Ciyaarta Nabadda, Cinwaanka cusub ee dagaalka royale ee beddelaya PUBG, wuxuu soo ururiyey qiyaastii $ 70 milyan oo dakhli ah bishii Maajo ee Shiinaha.
Waxaan tijaabinay LEGO Tower, ciyaarta dhismaha NimbleBit oo horeyba ugu jirtay beta furan
LEGO Tower waa imaansho xiiso leh oo aan caadi aheyn oo aan waqtigeena ku qaadno abuuritaanka munaarad oo aan booqanno kuwa saaxiibbadeen ah.
Dhamaan ciyaaraha aad ku yeelan doonto Stadia bilowga
Stadia waa adeegga qulqulka ciyaarta ee Google oo aan arki doonno inuu muuqdo bisha Nofembar oo leh liistada ciyaaraha oo dhammaystiran.
Shaybaarkaaga sheybaarka leh Walter White ee Jabinta Xumaanta: Qaybaha Dambiga
Ka caawi Walter White jabinta xun: Cunsurrada Dembiyada si ay u qabtaan burcadda waddooyinka si ay u dejiyaan hadafkaaga oo ay u soo baxaan goos goos.
Isu rog ilaa 80 miro kala duwan oo ah geedaha Beeraha
Beerta Beeraha waa casaan cusub oo ka socda Noodlecake Studios oo kuu dhigaya booska aad awoodid inaad la tacaasho illaa 80 ...
Hadda waad iska qori kartaa LEGO Tower, oo ah kii ugu dambeeyay ee shirkadda caanka ah ee deenishka ku ciyaaraan
Mini Tower, LEGO Tower wuxuu ka yimaadaa isla istuudiyaha ciyaarta fiidiyowga si aad ugu dhisto munaarado leh xarumo iyo guryo badan.
Sidii aad ugu jirtay Mad Max ula dagaallanto kooxdaada kuwa kale ee jooga BOWMAX
BOWMAX waa ciyaar ka duwan waxkasta oo aan beryahan ku aragnay Android. Ciyaaryahan badan oo khadka tooska ah ku toogta a la Mad Max
Pokémon GO wuxuu mar labaad abaabuli doonaa Toddobaadka Tacliinta
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan Toddobaadka Toddobaadka Toddobaadka ee Pokémon Go oo si rasmi ah loogu dabaaldego inta u dhexeysa Juun 4 iyo 11, sida horayba loo xaqiijiyay.
Dagaalyahannada Waterdeep a Dungeon & Dragons laakiin way ka fogaanayaan
Dagaalyahannada Waterdeep xoogaa way ka fog yihiin waxa aad ka filan lahayd Dungeon & Dragons-ka mobilkaaga Android.
Archero waa ciyaar iska caadi ah oo caadi ah oo aad kaliya haysato hal nolol oo aad ku guuleysato
Archero waxay u timid inay ku guuleysato Android iyada oo ay ugu wacan tahay waxqabadkeeda farsamo iyo habka asalka ah ee loo adeegsado dagaalka si ay kuugu dhacdo jacaylka ciyaarta ugu horeysa.
NomNoms! waa ciyaar xariifnimo weyn oo xariifnimo leh oo balwad leh oo aadan tabi karin
NomNoms! Waa wax aan caadi aheyn oo aad u isticmaasho shaashad si aad u bilowdo Noms oo markaa aad u dhammaystirto dhammaan heerarka adiga ku sugaya.
Sida loo sahlo qaabka toogashada otomaatiga ah ee Fortnite
waxbarid ficil tallaabo tallaabo ah oo wax ku ool ah si aad u ogaato sida loo kartiyeeyo habka dabka otomaatiga ah ee Fortnite for Android
Ka caawi gabadha yar inay ka hesho farxad weligeed ah «barta oo arag» Nasiib-darrada Yar
Dhibaatada yar yar waxaad u baahan doontaa inaad ka caawiso nasiib-darrada yar inay ogaato waxa dhacaya oo soo bandhigto sheekooyinkaas iyada ku mari doona meelo fara badan.
Haddii aad xamili karto sanduuqyada bililiqaysiga ee Warhmmer: Chaos & Conquest, waxaad ku haysataa fowdo farahaaga.
Warhammer: Chaos & Conquest waa ciyaar inagu geynaysa koonka Warhammer, inkasta oo laga helay freemium iyo sanduuqyadan bililiqada xun.
Sida loo soo dejisto waraaqo toos ah oo toos ah qoob ka ciyaarka Fortnite. (Oo ku dabaqo barnaamijkaaga Android)
Fiidiyowga aan ku tusayo sida loo soo dejiyo Daarashka Tooska ah ee qoob-ka-ciyaarka Fortnite iyo sida loogu dalbado boosteejadaada Android.
Saddex ciyaarood oo Iid ah oo cusub oo ka socda Ciyaaraha Faraska Birta ee Beta Ma Seegi Karo
Ciyaaraha Faraska Birta waa mid ka mid ah istuudiyaha ugu caansan ee laga isticmaalo Android hadana waxay soo saartay 3 caajis oo aadan beta ku seegi karin.
Talion waa CIYAARTA cusub ee loo yaqaan 'GAMEVIL MMO' oo leh weerar toos ah oo aad naftaada ku waayi karto adduunkeeda weyn
Talion waxaa sii daayay GAMEVIL si aad ugu raaxaysatid khadka tooska ah ee RvR inta udhaxeysa xulafada ciyaartoy kaladuwan. Ha ka daahin rakibidda.
Marvel Super War wuxuu ku yimaadaa qaabka MOBA ilaa Android ee beta xiran
Haddii aad ku nooshahay mid ka mid ah dalalka mudnaanta leh waxaad isku dayi kartaa MOBA Marvel Super War si aad ugu raaxaysato geesiyaasha aad ugu jeceshahay Android.
An ode ah asalka Sim City: TheoTown ee loogu talagalay Android ee Isbaanishka iyo qad la'aanta
TheoTown waa jilid magaalo ah oo Isbaanish ah oo aad ka ciyaari karto khadka tooska ah si aad u dhisto magaalooyin waaweyn oo leh goobo fara badan.
Maamulaha Motorsport 3 ee dhabta ah dadka jecel jilitaanka F1 - waxaan ku tijaabinay inaan xor noqono maalmahan
Maamulaha Motosport 3 ayaa lagu heli karaa bilaash maalmo waxaana tijaabinay inaan kuu sheegno waxa dhabta ah ee jilitaanka F1 uu kuugu jiro mobilkaaga.
Dib u eegista Pokémon Rumble Rush: gacha kale, laakiin markan ka yimid Nintendo
Pokémon Rumble Rush wuxuu yimaadaa Android ka dib markii uu ogaaday in Belgium ay mamnuucday sanaadiiqda bililiqada. Ciyaartan Nintendo-na iyaga ayaa ka buuxa.
League of Legends wuxuu yeelan doonaa nooc u gaar ah taleefannada casriga ah
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan daahfurka nooc ka mid ah League of Legends for telefoonada Android oo si rasmi ah u imaan kara sannadkan.
Waxaan ku ciyaareynaa Fortnite Mi9, ciyaar buuxda oo aan goyn, si aad u aragto wax qabadkeeda dhabta ah
Waxaan ku ciyaareynaa Fortnite Mi9 anagoo ujeedada kaliya ah ee aad ku arki karto waqtiga dhabta ah, bilaa gooyn iyo faafreeb la'aan, waxqabadka dhabta ah ee heerka sare ee Xiaomi.
Sawirada iyo fiidiyowyada uguhoreeya ee Mario Kart Tour ee taleefannada gacanta waa la sifeeyey
Fiidiyowgii ugu horreeyay ee Mario Kart Tour ayaa la dusiyay markii wajiga beta uu ka dhex bilaabmay dadka isticmaala ee qayb ka ah barnaamijkan.
Pokémon Rumble Rush ayaa si rasmi ah loogu sii daayay Android
Raadi wax badan oo ku saabsan daahfurka Pokémon Rumble Rush oo si rasmi ah loogu sii daayay taleefannada Android. Waxaa laga heli karaa Google Play.
La ciyaar Auto Chess ka hor 7 ciyaartoy kale qaabkan aadka u gaarka ah ee 'DOTA mod'
Isku-dhaf weyn oo noocyo kala duwan ah waxaan ka helnaa Auto Chess, qaab gaar ah oo laga soo qaatay DOTA weyn. Ma seegi kartid ballanta.
Call of Duty Mobile wuxuu imanayaa Android-ka beta todobaadka soo socda
Mid ka mid ah ciyaaraha aadka loo filayo ee loogu talagalay barnaamijyada moobiilka, Call of Duty Mobile, ayaa imaan doona beta toddobaadka soo socda.
Maamul kooxdaada Formula 1 ee freemium F1 Manager
Maamulaha F1 ayaa kuu kaxeynaya tartamada ay la socdaan darawalada ugu caansan si ay u bilaabaan safarkaaga xirfadeed ee maamule kooxeed.
Xilliga 7-aad wuxuu ku yimaadaa PUBG Mobile oo wata Garka, Adeeg bixiyaasha Bariga Dhexe, iyo Inbadan
Haddii aad saaxiibo ka leedahay wadamada Bariga Dhexe, waxay horeyba ugu leeyihiin sheybaarkooda PUBG Mobile xilli ciyaareedka toddobaad ee cusub.
John Wick wuxuu raacayaa raadkii Thanos ee Fortnite
Mar labaad Fortnite ayaa heshiis la gaadhay si kor loogu qaado filim cusub oo hordhac ah. Waxaan ka hadlaynaa John Wik
Hamster-ka ugu halista badan adduunka ee ku jira Hamsterdam-ka weyn
Ham Amsterdam waa ciyaar dagaal oo ciyaaruhu yihiin kuwo waali ah oo dharbaaxo ka buuxdo. Ka xoree waddooyinka tuugada.
Pokémon Rumble Rush oo ku saabsan inuu yimaado Android, horeyba looga heli jiray Australia
Pokémon Rumble Rush waa ciyaar cusub oo moobiil ah oo aan mar dhow awoodi doonno inaan ku ciyaarno aaladaha mobilada oo sidaasna lagu ugaarsado Pokémon.
Calaamadee wadada robot-ka ee ilaha si aad ugu gayso meeshii ay ahayd Express Thru
Express Thru waa ciyaar caadi ah oo aan ku xallinay heerar badan si aan uga caawinno robotka liita ee uruuriya ilaha.
Pokémon GO wuxuu dhaafey 1.000 bilyan oo soo dejin ah
Ka ogow wax badan oo ku saabsan soo dejinta Pokémon GO adduunka oo dhan sannadihii la soo dhaafay taas oo ka badan waxa ay dad badani filayeen.
U fiirso oo ku tijaabi asalka asalka dhimirka ee loo yaqaan 'XOB'
XOB waa soo-jeedin asal ah oo lagula dagaallamayo maskaxdaada cayaaraha oo aad iska ilowdo ciyaaro kale. Caadi ah oo leh xayeysiis 24 ah.
Cayaaraha Cayaaraha hadda waa kuwo fiican maxaa yeelay waxay noqotay xarunta xakamaynta ciyaaraha Android
Waxaan ku tusineynaa howlaha cusub ee Play Games ama Android Play Games, waxyaabaha sida weyn loo iloobay ee Google ee loo cusbooneysiiyay si weyn.
Bedelka 'Game for Peace' ee Tencent ee 'PUBG Mobile' waa guul weyn Shiinaha
Tencent ayaa dhawaan shaacisay bedelka PlayerUnknown Battlegrounds (PUBG) ciyaar loogu magac daray "Ciyaar Nabadeed."
Ka caawi maroodiga saaxiibtinimada leh inuu ka gudbo buundooyin badan oo ku yaal Euler the Elephant
Maroodiga Euler waa halyeeyada halxiraalahaas oo aad ku burburinayso buundooyin fara badan inta uu dhex marayo.
Temple Run: Hunters Hunters ama markaan fikrad iga yaraado inaan bilaabo ciyaar cusub
Haddii aad jeceshahay halxiraalaha nooca nacnaca ee 'Candy Crush Saga', waxaad horeyba u haysatay Temple Run: Hunters Hunters oo ah sharad cusub oo taxanahan ah.
Ciyaar cusub oo Pokémon ah oo loogu talagalay taleefannada casriga ah ayaa imanaya 2020
Ka ogow wax badan oo ku saabsan ciyaarta cusub ee Pokémon ee taleefannada gacanta ee la doonayo in si rasmi ah loo bilaabo Maarso 2020 sida horay loo xaqiijiyay.
Durango: Dhulalka Duurjoogta ah waa badbaadin weyn oo dinaasoor MMO ah oo leh xorriyad badan oo ficil ah
Durango: Dhulalka Duurjoogta ah waxaa ka buuxa dinosaurs, ficillo badan, badbaado iyo suurtagalnimada abuuritaanka tuuladeena.
Gacha RPG oo leh Revue Starlight RE LIVE oo la socota sheekada manga
Revue Starlight Re LIVE waa mid ka mid ah boorashyada aad ku bilaabi karto inaad ku hesho cayayaanka aad ka heshay noocaan.
Ku fuul sabuuraddaada Nightverream orodyahanka aan dhamaadka lahayn
NightStream waa orod aan dhammaad lahayn oo aan ku fuuli karno taxane looxyo duulimaad ah iyada oo loo marayo magaalo mustaqbal mustaqbal leh oo wadooyin badani ka buuxaan.
Fortnite wuxuu gaaraa xilliga XNUMX hub cusub, goobo iyo inbadan
Xilligii sagaalaad ee Fortnite ayaa hadda lagu heli karaa iyada oo loo marayo cusbooneysiinta ciyaarta cusub, waxayna na siisaa habab cusub oo barokac ah, goobo iyo hub
La tartan tartamayaasha kale adoo wata baaskiilkaaga BMX ee Stickman Bike Battle
Baaskiilku wuxuu noqon doonaa saaxiibkaaga ugu fiican kulankaan oo loo yaqaan 'Stickman Bike Battle' taasina waxay ka bilaabaneysaa fikradda ah inay wajahayaan ciyaartoy kale.
Blast Ball Blast waa «Pang» midabyo iyo lambarro badan leh
Ciyaar cusub oo bilaash ah oo loogu talagalay Android oo u muuqata inay aad ugu egtahay Pang dhinacyada qaarkood. Horaad ugu haysatay Play Store.
Ku fuul dinosaur-gaaga Dagaal buuxa oo aad u badan oo khadka tooska ah ku socda
In wuxuush biraha buuxa waxaad ka heli doontaa daraasiin dinosaurs si loo hagaajiyo si aad ugu guuleysato 5v5 ciyaaraha multiplayer.
Qisooyinka Dabaylaha, ama markay MMO naga tagi karto innagoo ku mashquulsan quruxdeeda muuqaallada
Sheekooyinka Dabaysha waa MMO halkaas oo aad ku samayn karto waxyaabo badan oo kala duwan sida inaad naftaada raadsato, aad beer yeelato, oo aad la dagaallanto.
Ku xujee saaxiibbadaa ciyaaraha balwadaha badan leh ee Golf Blitz
Golf Blitz oo loo adeegsado golf marmarsiinyo, waa ciyaar cusub oo ka socota Noodlecake Studios taasoo naga dhigeysa dhadhanka ugu fiican ee ugu fiican afkeena.
Hadaf cusub oo soo dhexgal ah maalin kasta oo ku yaal 'Noodlecake's Stealth Ops'
Noodlecake Studios Sneak Ops waxay keentaa muuqaalkaas Retro ee aad ka heshay qalabkaaga mobilada. Soo gal saldhigga cadowga.
Qoraallada Da 'weyn: Baalashle ayaa hadda loo heli karaa qof walba markuu ka baxo beta
The Elder Scrolls Blades waa ku darista cusub ee istuudiyaha ciyaarta fiidiyowga caanka ah ee Bethesda. Ka dib markii ay ...
Sida loogu ciyaaro qalabka miinada ee Android adigoon isticmaalin barnaamijyo
Raadi wax badan oo ku saabsan habka aan ugu ciyaari karno miino-baareyaasha taleefankayaga Android adigoon kala soo degsan codsiyada taleefanka.
Ficilkii ugu fiicnaa iyo soo bandhig farsamo ee xiisahaan loo yaqaan 'Grimvalor'
Grimvalor wali wuxuu kujiraa beta barnaamijka Google Play, laakiin wuxuu leeyahay waxwalba oo kamid noqoshada ciyaaraha sanadka oo leh dhamaan taxanaheeda muuqaalada.
Smite Blitz wuxuu ku qaadanayaa kahor intaanad xakamayn ilaahyada quraafaadka ah ee RPG taatiko ah
Smite Blitz waxay kugu qaadaneysaa inaad cag dhigto Masar hore sidaasna waxaad kubilaabeysaa safarkaaga gacmaha in kabadan 60 ilaahyo quraafaad ah.
Ka taxaddar oo tababar fardahaaga si aad u soo saarto horyaalnimada horyaalka Rival Stars Racing Racing
Rival Stars Faraska Tartanku wuxuu ku siinayaa labadoodaba jilitaan iyo ficilnimada fuushan faras oo aad adigu laftaadu ku tababartay xasiloonidaada.
Mashiinnada 'GRID Autosport' waa guuxayaan - waxay ku biirayaan beta-ga multiplayer ee hadda xiran
Haddii aad jeceshahay GRID Autosport, wakhti hore ayay qaadanaysaa in la soo diro codsiga in lagaa aqbalo beta-ka ciyaartan xiisaha leh ee baabuurka.
Hadda waxaad ka ciyaari kartaa Fortnite oo ka socda Xiaomi Redmi Note 7 Pro
Dhowr toddobaad ka hor waxaan ku dhawaaqnay in shaqada hadda jirta ee qoyska Redmi Note ay la jaan qaadi karto ...
Adigu waxaad tahay tallaalka dilaaga martida ah ee balwadda leh ee loo yaqaan Virus War
Dagaallada Virus-ku waxay leeyihiin shaqo farsamo ahaan ku saleysan baabi'inta boqolaal fayras. Ah, iska ilow maraakiibta, waa tiro.
Ka difaac aagga rooxaanta iyo wuxuushyada Difaaca Aagga Madow
Difaaca Aaga Madoow waa inaad ka takhalustaa boqolaal dhiqle oo cabsi leh oo kuu imaan doona si ay isugu dayaan inay kugu baabi'iyaan mugdiga habeenkii.
Dabka Bilaashka ah, kani waa xifaaltanka cusub ee Fortnite iyo PUBG ee loogu talagalay Android
Dabka Bilaashka ah waa Dagaal Royale cusub oo u yimid inuu la tartamo PUBG Mobile iyo Fortnite ee Android. Hantideeda ugu weyn? Mudada ay ciyaarahu socdaan.
Ka dhig ariga inuu fuulo meelaha ugu sarreeya Flip Flop
Flip Flop ayaa ku hor dhigaya maqaarka ariga waalan ee ay tahay inuu fuulo meelaha dhaadheer si uu u helo lacag badan oo dahab ah.
Ka difaac saldhiggaaga cadawga badan ee Maalmaha Soo Socda: Difaaca & Istaraatiijiyadda
Days Bygone waa ciyaar cusub oo Android ah oo la socota shaqada guriga oo si fiican loo qabtay si ay kuugu xirnaato inaad difaacdo saldhiggaaga.
PGA TOUR Golf Shotout sida arcade si golf loogu ciyaaro ciyaartoy kale
Tartan goobeedkii 'PGA TOUR Golf Shootout' wuxuu noo geynayaa isboorti taas oo ah inaynu noqono mid sax ah sida aan awoodno. Arcade lagu raaxeysto.
Emojis aniga, Emoji Mine, madadaalo iyo balwad leh
Emojis waxay ku guuleysataa shaashaddaada gacanta Emoji Mine, oo ah ciyaar xujo caadi ah oo aad ku hagayso daaqsin emojis ah.
Nintendo Hada Aqbalaya Codsiyada Mario Kart Tour Xiran Beta
Mario Kart wuxuu ku dhow yahay geeska na sugaya Nintendo wuxuu durbaba aqbalayaa codsiyada beta-ga xiran ee bilaaban doona dhamaadka bisha May.
Hadda waa suurtagal in lala ciyaaro Thanos cusbooneysiintii ugu dambeysay ee Fortnite
10-ka maalmood ee soo socda, waxaan gacanta ku haynaa MTL-ka Avengers Endgame, oo aan ku heli karno Quinjet si bilaash ah.
Ka soo kabasho darbiyada si aad ugu disho cadawga qabatinka qabatinka qabatinka leh
Flaming Core waa mid ugub ku ah Android oo leh heer farsamo iyo muuqaal sare. Haddii aad raadineyso ficil wanaagsan, horeyba waad u laheyd.
Bilyaariyada wanaagsan ee Mareykanka ee Arcade Pool Royale for Android
Pool Royale waa ciyaar cusub oo loogu talagalay Android taas oo ay tahay inaad ka gudubto dhammaan heerarka ciyaar ku saleysan bilyaariga Mareykanka.
Siklroad Online, soo celinta musiibada ee mid ka mid ah MMO-yada ugu caansan
Ma ahan inaan dooneyno inaan haramaha dhigno Silkroad Online, laakiin waxa ay ku qabteen ciyaartan ayaa ah in la geeyo maxkamad kooxdan oo kale.
Oddmar, ama waa maxay fasalka Master-ka ee noocyada barnaamijyada
Oddmar waa ugudub ku sifaynta barnaamijka. Tacaburrada, bay'adaha cajiibka ah, qaabeynta astaamaha iyo waxyaabo kale oo badan oo tayo sare leh.
Maalinta furitaanka ee Avengers: Endgame, Fortnite waxay noo keeni doontaa dhacdo cusub oo gaar ah oo loogu dabaaldego filimkii ugu dambeeyay ee Marvel
Ninja Dude vs Zombies 2, waa ciyaar aan caadi aheyn oo aad ku calaamadeyso katana
Ninja Dude vs Zombies 2 waxay timaadaa Play Store iyadoo leh astaamo dabeecad wanaagsan oo aysan jirin wax PVP ah oo lagula dagaalamo ciyaartoyda kale.
Xadgudubka Birta si loo naqshadeeyo naqshadeynta, laakiin in la iloobo nuxurkeeda
Xadgudubka Birta Birta waa bilaa shaqo buuxa oo aad si dhib leh uga qayb qaadan doontid dagaalka. Waxaad ahaan doontaa madaxa kabtanka ciidammadaada si aad ugu hoggaamiso iyaga guul.
Ku dheji mowjadda weyn ee 'True Surf', ciyaarta rasmiga ah ee WSL ee sharfta cayaarahaan weyn
Haddii aad rabto inaad ogaato sida khibradda duufku u eg tahay moobaylkaaga, Run Surf ayaa adiga ku siinaysa. Qabille oo weyn oo leh jilitaan weyn.
Dhanka aan la koobi karin iyo wixii ka dambeeya, illaa iyo inta aynaan ku qarxin gantaalka Gantaalka Iidle
Idle Rocket waa ciyaar xiiso leh oo casri ah oo aad ku hagaajinayso gantaalahaaga si aad u gaarto dhererka ugu sarreeya ee suurtogalka ah sidaasna lacag ku kasbato.
OCO waa xujo aan caadi aheyn oo loogu talagalay dadka maskaxda wax ka qaba iyo heeso elektro badan
Haddii aad raadineyso xujo si aad qumbaha ugula cunto OCO waad wada haysataa. Waxaa ka mid ah muusikada elektarooniga ah iyo qaab muuqaal yar oo muuqaal ah oo lagu raaxeysto.
Dib ugu soo cesho xusuustaadii kaa maqnayd hal-xidhaalaha weyn ee Maskaxda Maskaxda: Hal-xidhaalaha Hal-xidhaalaha
Maskaxda Maskaxda: Hal-xidhaalaha Hal-xidhaalaha ayaa kuu kaxayn doona maskaxda dhakhtarka aad u baahan tahay inaad isku xidho walxaha, aad la kulanto jilayaasha iyo inaad xalliso xujooyinka 3D.
Dhaqaaq, dib u buuxi ama ku toogto Pocket Cowboys, oo ah kubad-sameeye khadka tooska ah ku saleysan internetka
Pocket Cowboys waa ciyaar cusub oo loogu talagalay Android kaas oo aad ku qasbanaan doonto inaad go'aansato inta udhaxeysa 3 ficil si aad nasiibkaaga ugu rido ciyaaraha multiplayer.
Tower Breaker waa gebi ahaanba Hack & Slash taleefankaaga gacanta ee Android
Tower Breaker wuxuu kuu ogolaanayaa inaad furto dhamaan cadhadaada si aad u burburiso bahallada cadowga ah ee jidkayaga u mara dabaq kasta oo munaaradda ah.
Fortnite horeyba wuxuu noo ogolaaday inaan soo nooleyno asxaabtii la tirtiray
Nooca Fortnite 8.30 wuxuu noo ogolaanayaa inaan ku soo nooleyno asxaabtii la tirtiray iyada oo loo marayo gawaarida reboot.
Xalliyaan xujooyinka pixel ee KONAMI ee Pixel Puzzle Collection, ciyaar gebi ahaanba bilaash ah
Uruurinta Pixel Puzzle waa ciyaar gebi ahaanba bilaash ka ah Konami weyn oo si toos ah kuugu jiheysa jilayaasha pixelated
Ka dib Burner Climax waa soo noqoshada mid ka mid ah kulamada fiidiyowga ee ugu caansan ee SEGA
Ka dib Gubashada Climax waa soo degitaan weyn oo ku yimaada Android si aad ugu raaxaysato aalado casri ah oo mobiladaaga moobiilkaaga ka mid ah
Tencent waxay daahfureysaa barnaamijka caalamiga ah ee WeGame X ee casriga iyo aaladaha kale
Tencent ayaa soo bandhigtay barxadda ciyaarta ee "WeGame X". Kani waa daabacaadda caalamiga ah ee dukaanka WeGame, oo u adeegta suuqa Shiinaha.
Daabacaadda Waayeelka: Blades waa Bethesda sharad cusub oo moobiil ah oo leh wanaag iyo diidmo
Qoraalka Da'da ah: Blades of Bethesda waxay kuu ogolaaneysaa inaad naftaada fursad u siiso inaad dib ugu dhisto magaaladiina RPG iyadoo lala dirirayo waqtiga dhabta ah.
Sida loo soo dejisto mods game iyo barnaamijyada loogu talagalay Android
Fiidiyowga oo aan ku tusayo habka ugu wanaagsan ee loo soo dejisto qaababka ciyaarta iyo codsiyada loogu talagalay Android gebi ahaanba bilaash.
Fornite waxaa lagu cusbooneysiiyay hub cusub iyo habab badan oo ciyaarta ah
Fortnite waxaa lagu cusbooneysiiyay labo sheeko oo xiiso leh: Qaanso qarxa iyo qaab ciyaar waali ah. Ha moogaanin faahfaahinta!
Habka Hal-abuurka ee Fortnite wuxuu heli doonaa shaqooyinka aadka loo filayo
Ciyaaraha Epic, oo ah shirkadda ka dambeysa horumarinta Fortnite, ayaa xaqiijisay in Habka Hal-abuurka ee Dagaalkeeda Royale uu heli doono horumar cusub. Laserkee ayuu noqon doonaa?
Dhexgal naftaada dhirta iyo xayawaanka meeraha Recosido meerayaasha gaarka ah ee loo yaqaan 'Roots Roots'
Xididdada Ruuxu waa ciyaar madal aad u qurux badan oo aan u baahnayn waxqabad la leh rasaasta iyo hubka fudud ee adduun u gaar ah.
Ugaarsadayaasha Daaweeya waa masrax madadaalo leh oo leh qaab retro aan shaki ku jirin
Hunters Cure waa madal madadaalo iyo balwad leh taas oo aan loo baahnayn boodbooyin iyo hub badan oo lagu weerari karo cadowga.
Minigame cusub oo Google ah oo aadan lahayn xiriir
Google waxay na siisaa minigame cusub oo fiican iyada oo loo marayo barnaamijkeeda oo si otomaatig ah u shaqeynaya markii aan khadka ka baxno
Ciyaar run ah oo dagaal Fighter Street with Tiny Gladiators 2
Haddii aad rabto inaad ka furto feedhka bidix iyo midig, waxaad horeyba u haysatay Tiny Gladiators 2 mobilkaaga Android si aad u raacdo wixii ka dambeeya Street Fighter.
Cusbooneysiinta cusub ee Fortnite waxay ku dareysaa walxo cusub si ay uga soo kabtaan gaashaan iyo caafimaad
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee Fortnite waxay ka saareysaa suurtagalnimada soo kabashada gaashaanka iyo caafimaadka iyadoo ciribtirka cadawga si otomaatig ah.
Wuxuush leh dabeecad waa nooc aad u bahal ah oo tayo sare leh «io» nooc
Wuxuush la Attitude waa cinwaan tayo sare leh oo kuu keenaya waayo-aragnimo u eg console-ka ah mobilkaaga oo aadan ka maqnaan karin.
Xayawaanadaas waalan ee ku tuuraya muuska muusikada multiplayer online Critter Clash
Critter Clash waa ciyaartoy badan oo khadka tooska ah ku ciyaaraya taas oo ay tahay inaad ka takhalusto kooxda xayawaanka ee uu maamulo qofka ka soo horjeeda.
PUBG Mobile hadda lagama ciyaari doono gudaha Hindiya in kabadan 6 saacadood maalintii
Kadib markii laga mamnuucay magaalooyin kala duwan oo kuyaala dalka Hindiya, shirkada PUBG Mobile ayaa soo bandhigtay xaddidaad cusub oo lix saacadood ah oo xadidan oo ay ku ciyaareyso wadanka gudihiisa.
Qabsada oo kobciya noolaha ku jira adduunkan furan ee loo yaqaan 'Evertale'
Ciyaar door-ciyaar ah oo loo yaqaan 'Evertale' oo lagu garto 180 noole si ay u soo qabtaan una soo ururiyaan. Isugeyn udhaxeysa Pokémon iyo Final Fantasy.
Pliq waa «Tetris» halkaas oo ay tahay inaad ku abuurto qaybahaaga tilmaamo
Haddii aad tahay taageere Tetris, waxaad horeyba u laheyd ciyaar aad isku daydo: Pliq. Farahaaga ku sawir sawirada lama huraanka ah si aad isugu wada dhejisid.
PUBG Mobile wuxuu tijaabiyaa xayiraadaha saacadaha ciyaarta maalin kasta ee wadamada qaarkood
Taasi waa in la yiraahdo, in PUBG Mobile, waqti cayiman, ay ka digeyso in aan server-yada la geli karin ilaa maalinta xigta.
Ku deg sidaad u awoodo Mars, Venus iyo meerayaasha kale ee Lander Pilot
Lander Pilot waa ciyaar caadi ah oo xiiso leh taas oo aad sahamiso dusha sare ee meerayaasha kale adiga oo kaashanaya dhulkaaga.
NyxQuest: Rind Kindres wuxuu ka yimaadaa Nintendo Wii si uu kuugu geeyo Giriiggii hore
NyxQuest: Kindres Spirits waa ciyaar ka timaada Nintendo Wii waana qaab garaaf ahaan aad u fiican. Ciyaar lagu raaxeysto mobilkaaga.
Xilli cusub oo loogu talagalay PUBG Mobile oo leh cusbooneysiin cusub iyo dabaaldegga sanad-guuradii koowaad
Haddii aad ciyaaray PUBG Mobile xilli kasta oo sanadka ka mid ah, ma seegi kartid sannad-guurada koowaad hadiyado badan iyo in ka badan.
Sida loo helo iKÓNIKO Fortnite gaar ah oo loogu talagalay Samsung Galaxy S10
Haddii aad leedahay Galaxy S10, waxaad nasiib u leedahay inaad awood u yeelatid inaad hesho maqaar gaar ah oo Fornite ah oo bilaash ah.
Era of Legends, waa MMORPG cusub oo loogu talagalay kuwa u xiiseynaya World of Warcraft
Haddii aad raadineyso khibrad khadka tooska ah oo badan oo khadka tooska ah leh khiyaali badan, Era of Legends waa ka fiican yahay moobiilkaaga Android.
Hadda waad isdiiwaangalin kartaa kahor Wicitaanka Waajibaadka: Moobaylka, ugu dhakhsaha badan moobilkaaga Android
Wicitaanka Waajibaadka: Moobilku waa ciyaarta cusub ee rukhsadda ee dhowaan iman doona Android. Hadda waad iska qori kartaa muuqaalka.
Google wuxuu soo bandhigayaa STADIA, oo ah adeegga ciyaarta socodka ee loo isticmaalo qalabka kala duwan
Google ayaa hadda soo bandhigtay waxa noqon lahaa adeegyadeeda baahinta ciyaarta Netflix taasina waxay kuu oggolaaneysaa inaad had iyo jeer ka ciyaarto biraawsarka Chrome.
Google ayaa caawin doonta horumariyeyaasha ciyaarta Android
Google wuxuu caawiyaa horumarinta cayaaraha Android. Ka ogow wax intaa ka badan oo ku saabsan shabakadda uu Google u sameeyay inay ka caawiso horumariyeyaashaas.
Ku boodbooda oo ku boodboodaa haadka dhamaadka aan dhamaadka lahayn ee moobilkaaga Android
Jaan-goyn weyn oo loo yaqaan 'Lakeless Lake' oo xayeysiintu sumcadda u leedahay waayo-aragnimada weyn ee ciyaaraha ee ay bixiso bilowgii hore.
Keen martida hudheelka dabaqooda madadaalo, Hotel Mania aan caadi ahayn
Hoteelka Mania waa casaan cusub oo loogu talagalay Android kaas oo ay tahay inaad macaamiisha u qaaddo dabaqyadooda si aad u maamusho hudheelkaaga.
Idle Wasteland: Tubada Badbaadada, oo ah guji ka dib apocalyptic guji RPG kaas oo ay jiraan waxyaabo badan oo la sameeyo
Haddii aad raadineyso RPG caajis ah oo kuwaa ah inay shaashadda si deg deg ah u garaacaan, Idle Wasteland: Tap Survival ayaa ku habboon maalmo badan oo ciyaaro ah.
16 arday ayaa laga qabtay dalka India iyaga oo ku ciyaaraya PUBG Mobile
Waxay dad badan u muuqan kartaa wax aan macquul aheyn sanadka 2019, laakiin dhawaan gobolka Gujarat ee India wuxuu mamnuucay ciyaarta dagaalka caanka ah ee PUBG Mobile.
Maaree maraakiibta hawada sare si aad nasiib ugu yeelatid guji Idle Space Tycoon
Haddii aad rabto inaad raacdo SpaceX, oo leh Idle Space Tycoon waxaad ku dhowdahay inaad ka sameyso moobilkaaga Android oo aad maamusho maraakiib fara badan.
Dib u eegista Stardew Valley: waadna ciyaari doontaa, ciyaari doontaa oo ciyaari doontaa
Dooxada Stardew wuxuu la yimaadaa Android-ka wax walboo caan ku ah kombiyuutarada. Ciyaar aad u wanaagsan oo aadan moobi karin moobilkaaga.
Orod oo ku bood adduun madow iyo caddaan ah oo cabsi leh oo ku jira orodyahanada 'GRIT Platform Runner' ee balwada leh
Haddii aad raadineyso tartan weyn, GRIT Platform Runner wuxuu kuu soo jeedinayaa inaad ku dhammeysid ciyaarta oo dhan hal heer oo leh 3 deegaan oo kala duwan.
Haa Bakeylaha 2 waa mid si qurux badan u dhameeya oradleyda oo leh pixels badan iyo midab badan
Haa Bunny 2 waa madal orodyahan aan dhammaad lahayn oo leh midabyo badan, pixels iyo xitaa sheeko jacayl ku saabsan mobilkaaga Android.
PUBG Mobile beta nooca 0.11.5 hadda waxaa lagu heli karaa qoriga cusub, gaari iyo waxyaabo kaloo badan
Qalabka 'PUBG Mobile beta' ayaa hadda lagu heli karaa nooc cusub oo keenaya warar muhiim ah sida qori cusub, gaari ...
Hada waad iska qori kartaa Harry Potter: Wizards Unite oo aad u diyaar garowdaa xaqiiqadeeda la kordhiyay
Harry Potter: Wizards Unite waa ciyaarta cusub ee Niantic ee ku saleysan koonka uu abuuray JK Rowling isla markaana dhowaan ku soo wajahan Android.
Fortnite wuxuu ku darayaa gaari cusub iyo animations cusub casriyeyntiisii ​​ugu dambeysay
Cusbooneysiinta Fortnite 8.10 waxay noo siineysaa sida ugu cusub ee cusub gawaarida loo yaqaan boloncho iyo animations cusub.
U dhaqaaq boqolaal taageerayaal ah si aad ugu garaacdo ciyaartoy kale magaalada Crowd City
Crowd City waa ciyaar aad ku dhaqaajineyso taageerayaal fara badan si aad ugu guuleysato ciyaarta isla markaana u muujiso wax walba oo ay taageerayaashaasi ku doonayaan.
Pokémon GO wuxuu xisaabiyaa 98% dakhliga ka soo gala dhammaan cayaaraha ku jira taxanahan
Ciyaarta Pokémon GO waxay soo saartay in ka badan 98% dakhliga ka soo xarooda dhammaan codsiyada Pokémon ee laga heli karo meheradaha moobiilka.
Ku guuleysato meerahaaga oo dhan ciidanka bisadahaaga Bisadaha Dagaalka
The Bisadaha Dagaalku waa ciyaar lagu dhiirrigeliyey birta birta ee loo yaqaan 'Capcom's Metal Slug' taas oo ay tahay inaad ku soo bandhigto dhammaan awoodda bisadaha meeraha.
Isku mashquul taatikada iyo sixirka RPG iyo gacha Brown Dust
Istaraatiijiyad waa muuqaalka aasaasiga ah ee dagaalka Brown Dust, oo ah tayo sare oo cusub, ciyaar aad u Aasiya ah oo loogu talagalay Android.
La kulan ciyaartoy kale kooxdaada geesiyaasha ah ee FRAG Pro Shooter oo noqo ciyaaryahanka adduunka ugu fiican
U qaado kooxdaada bot-ka si aad ula kulanto kuwa ka soo horjeeda si aad ugu maamusho iyadoo loo eegayo baahida dagaalka ee FRAG Pro Shooter.
.Ku xidhnow. waa xujo cusub oo ay tahay inaad ku xirto dusiyo isku midab ah
.Ku xidhnow. waa cinwaan cusub oo loogu talagalay Android kaas oo ay tahay inaad ku xirto foornada midabada kala duwan leh ee ka kooban heer kasta. Ciyaar balwad leh.
Google Play wuxuu taageeraa ciyaaraha bixiya abaalmarinta daawashada xayeysiinta
Soo ogow barnaamijka cusub ee Google Play kaas oo kuu oggolaanaya inaad ku aragto xayeysiisyada cayaaraha beddel u ah iibsashada gudaha gudihiisa.
Horyaalka Bullet dhammaantood waa «Fortnite» ka mid ah aaladda 2D ee mobilkaaga Android
Haddii aad raadineyso dagaal royale ah 2D, oo leh aalado badan, ficillo badan, oo aad ka dhisi karto, kor u qaadi karto geesigaaga oo aad uga hor tagto kuwa kale, kani waa Bullet League.
Ku ciyaar sida kaari ee koox garaaca bina-aadamka 'Incredibox' cajiibka ah
Incredibox wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ka toosiso koox ka mid ah sanduuqyada garaacista aadanaha moobilkaaga oo sidaasna kula wadaaga hal-abuurkaaga adduunka oo dhan.
Idle Hero TD waa difaac munaarad aad ku wajihi karto ciyaartoy kale iyo wax ka badan
Idle Hero TD wuxuu ku yimaadaa Android beta laakiin waxaad isku dayi kartaa qaar ka mid ah wanaaggeeda sida qaabkeeda offline si aad lacag u hesho.
MMO loogu talagalay halyeeyga manga: Alita, malag dagaal
Alita: Battle Angel waa ciyaar ku saleysan filimkii maalmo ka hor la sii daayay, in kastoo aysan ku jirin manga-ga caanka ah ee Japan laftiisa.
Maqaarka Galaxy ee Fortnite ayaa la heli doonaa illaa iyo Maarso 7
Soo bandhigida Samsung Galaxy Note 9 iyo Galaxy Tab S4 waxay ahayd qoriga bilowga ee Fortnite ...
Taangiyadaha kaladuwan ee cayaaraha badan ee ka dhanka ah 10 ciyaartoy ee Taangiyada Dagaalka: Legenfs of World War II
Taangiyada Dagaalka ayaa kuu qaadaya WWII sidaa darteed waxaad wajihi kartaa 10 ciyaartoy oo kale si aad uga doorato 30 gaari.
Ku noqo xirfad yaqan iyo ficil ahaan baaskiil wadista Downhill Masters
Downhill Masters waa ciyaar baaskiil lagu tartamo oo aad xirfad ku noqon karto kuna guuleysan karto horyaalada adduunka.
Ku dhaji si aad u siiso oo u qaadato oo u siiso vibes wanaagsan xayawaanada Squeelings
Squeelings waa ciyaar iska caadi ah oo aad qof walba siiso dareen wanaagsan oo aad ugu raaxeysato sida aad ugu beddesho dabeecad-xumada nolosha.
Pocket Mini Golf waa ciyaar kale oo aan caadi aheyn oo lagu tababarto lammaanahaaga 2D ama 3D
Pocket Mini Golf waa ciyaar madadaalo aan caadi aheyn oo loogu talagalay Android kaas oo aad fursad u heli doontid inaad ku bedesho aragtida 2D illaa 3D si aad u qorsheysato istiraatiijiyad.
Q12 waxay waalanayaan bisha Maarso, 8 maalmood gudahood waxay ku qeybin doonaan 21000 Euros abaalmarino
Waxaan horeyba kuugu sheegay dhowr jeer oo ku saabsan tartanka wareega wareega ee loo yaqaan 'Q12 trivia mobile', oo ah tartan si toos ah loo tabinayo ...
Waxyaabaha aad jeceshahay Spyro ee astaamaha Dragon Hada waxaa laga heli karaa Skylanders Ring of Heroes
Actision ayaa hada sii daayay gacha RPG-gaan oo la yiraahdo Skylanders Ring of Heroes wuxuuna noo keenayaa caalamka Spyro masduulaagii.
Xilliga Fortnite 8 waxaa hadda lagu heli karaa isbeddelada khariidadaha waaweyn
Xilli ciyaareedkii siddeedaad ee Fortnite hadda waa la heli karaa, sida dhammaan xilliyadii hore, oo gebi ahaanba bilaash ah, ka ogow waxa cusub halkan
Kumaa noqonaya cunugga ugu quruxda badan adduunka? Waxaad joogtaa Makhaayada Funky
Makhaayada Funky waa ciyaar cusub oo Android ah oo leh muuqaal muuqaal weyn, jiko badan iyo cunto kariyeyaal si dhakhso leh ugu adeegaya.
Dooxada Stardew waxaa la sii deyn doonaa bisha Maarso 14 ilaa Android
Dooxada Stardew waa ciyaar jilid weyn oo beeraley ah oo aan heli doono 14-ka Maarso ee loogu talagalay Android. Waad tirin kartaa maalmaha.
Weligaa xarfaha alifbeetadu uma qiimo badnayn sida ugu badan Typoman Mobile, oo ah barxad weyn
Haddii aad raadineyso wax ka duwan oo asal u ah aaladaha caadiga ah, Typoman Mobile waa tan ugu xariifsan ee aan aragnay beryahan.
Ku meeraar ganacsiga supermarket-ka Idle Supermarket Tycoon
Idle Supermarket Tycoon waa jilid jilitaan supermarket ah oo jilidle ah kaas oo ay ku jiraan xayeysiin badan si loo sii wado horumarka.
Hockey All Stars waxay kuu kaxaynaysaa jilid weyn oo isboorti ah oo aan dad badani aqoon
Hockey All Stars waa jilitaan jilicsan oo xariiqa xeegada ah kaas oo aad ku abuuri karto xuquuqo u gaar ah inuu ka ciyaaro horyaalka adduunka.
Markabkaaga u kaxee deked nabdoon oo ku taal jilitaanka Ship Sim 2019
Markabka 'Ship Sim 2019' waxaad ka dooran kartaa illaa 3 nooc oo kala duwan oo maraakiib ah: maraakiibta dalxiiska, maraakiibta xamuulka iyo booyadaha saliida. Cinwaan bilaash ah oo loogu talagalay Android.
Fancade wuxuu kudhowaad yahay sii socoshada Mekorama, in kastoo xoogaa kaladuwanaansho ah
Fancade waa dhowr ciyaar midkood, inkasta oo ay yihiin xujooyinkooda, iyo kuwa aad adigu abuuri karto naftaada, mid kamid ah astaamaha ugu fiican.
Kubbadihii ugu wanaagsanaa ee bilihii lasoo dhaafay Williams Pinball oo ka socda Zen Studios iyo miisaska caadiga ah
Williams Pinball wuxuu u yimaadaa Android si uu u qanciyo taageerayaasha cayaaraha kubbadda leh jilid aad u macquul ah. Mahadsanid.
Pokémon GO horeyba wuxuu kuu ogolaanayaa inaad sawirro ka sameysid Pokémon-kaaga adoo adeegsanaya xaqiiqda la kordhiyay
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan muuqaalka cusub ee Pokémon GO kaas oo aad ku qaadan karto sawirro Pokémon iyada oo ay ugu mahadcelineyso xaqiiqda ciyaarta.
Noqo macalinka tilmaamaha inaad ku baabi'iso cadaawayaashaada dhan Matman
Matman waa madadaalo caadi ah oo aanad awood u yeelan doonin inaad neefsato ilbiriqsi si aad ugu dhameysato boqolaal dagaalyahanada Lagdamaaga ah.
Dunida Halyeeyada waa MMORPG cusub oo la iska ilaaliyo
MMO-kartoon cusub oo loo yaqaan World of Legends. Waxaad ku haysataa bilaash Google Play Store si aad waqti fiican ugu hesho.
Budst Buddies waa mid caadi ah oo si wanaagsan loo qaabeeyey oo awood u leh inuu qof ku xiro. Waxaad ku haysataa bilaash Android.
Xariga si adag u jiid si aad u sii deyso fallaarta waqtiga saxda ah ee ku jira Mr Bow
Mr Bow waa cinwaan cusub oo loogu talagalay Android kaas oo aad kula ciyaari karto saaxiibkiis mobilkaaga. Casaan bilaash ah oo mobilkaaga ah.
Quest Town Saga waa Kairosoft-ka cusub oo ah RPG-ga caadiga ah dhammaan dhinacyadiisa
Kairosoft horeyba khabiir ayey ugu tahay khilaafyadaan waxayna na keeneysaa Quest Town Saga, cinwaan isku dhafan ficil iyo jilid RPG ah.
Ku cusbooneysii PUBG mobilada qaabka zombie-ka dadka degan iyo wax badan
PUBG Mobile waxaa lagu cusbooneysiiyay qaab zombie cusub oo ay keeneen Resident Evil 2. U diyaargarow zombie holocaust mobilkaaga Android.
Islet Online waxaa macquul ah inay noqoto Minecraft MMORPG inuu la ciyaaro asxaabtaada
Islet Online, tallaabo kasta oo laga qaado deegaanka waxay saameyn ku yeelan doontaa nidaamka deegaanka. Minecraft MMORPG oo aadan seegi karin.
Ka noqo shark filimka Spielberg ee JAWS.io, ciyaar aan caadi ahayn oo laba-daqiiqadle ah
Filimka Spielberg wuxuu halkan ku leeyahay ciyaar aad u fara badan oo ciyaartoy badani ku dheehan tahay oo ciyaaruhu yihiin 2 daqiiqo si ay u noqdaan tiburon ama markab u noqdaan.
Ciyaaraha ugu wanaagsan isboortiga ee loogu talagalay Android ee 2019
Baro afartan ciyaarood ee isboorti ee loogu talagalay Android kuwa jecel kuwa ugu fiican ciyaaraha isboortiga ee hadda ku yaal Bakhaarka Play Store.
Linn: Jidka Orchards, oo ah goob xujo weyn oo leh muuqaal muuqaal aad u taxaddar leh
Linn: Waddada Orchards-ka waxay ku jiheysaa isha taallada 'Monument Valley' ee dhiirrigelinta muuqaalka ah si ay noogu keento farsamo-yaqaanno asal ah oo heer sare ah.
Nitrome wuxuu mar kale ku soo laabanayaa Spicy Piggy, oo ah barxad leh orod badan oo aan dhammaad lahayn
Piggy Spicy waa madal cusub oo loo yaqaan 'Nitrome platform' oo ku timaadda dhammaan hamiga ah inuu noqdo mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan sanadka.
Dooxada Stardew hadda waxaa laga heli karaa diiwaangelinta hore ee Google Play
Dooxada Stardew hadda waxaa laga heli karaa diiwaangelinta hore ee Google Play, wax badan ka sii ogow ciyaarta cusub ee dhowaan ku soo socota Android.
Pokémon GO wuxuu ku dhawaaqayaa hagaajinta Dagaalada Tababaraha
Ka ogow wax badan oo ku saabsan horumarka cusub ee dagaalladii tababaraha ee imanaya Pokémon GO, iyo sidoo kale horumarin cusub oo iman doonta ciyaarta toddobaadkan.
Dabeylaha sare iyo khadadka zip ayaa hela isbadal weyn oo ku saabsan cusbooneysiintii ugu dambeysay ee Fortnite
Ciyaaraha Epic waxay soo saareen cusbooneysiin cusub taas oo baalasha duufaanka iyo khadadka farxadda leh ay helayaan isbeddelo muhiim ah
Baakadkaas u qaado meesha ay ku socoto waqtigii loogu talagalay Baakadka Xullada aan caadiga ahayn
Picky Package waa casaan cusub oo loogu talagalay Android taas oo ay tahay inaad noqotid nin wax geeya adduunka dhererkiisu aad ugu eg yahay Minecraft.
Mugdiga ayaa kacaya waa ficil weyn oo RPG ah oo aad ugu raaxeysaneyso mobilkaaga
Haddii aad raadineyso qaab iskaashi ee ficil RPG ah, waad heli doontaa, iyo waxyaabo badan, oo leh Mugdi Sare, cinwaan ka jiray Android dhowr bilood hadda.
Pokémon GO wuxuu heli doonaa qaab sawir AR ah kaas oo kuu ogolaanaya inaad la sawirto Pokémon kasta
Niantic wuxuu dhowaan soo saari doonaa cusbooneysiin cusub oo loogu talagalay Pokemon GO. Sida ku xusan ogeysiiska rasmiga ah, ciyaartu waxay heli doontaa qaab sawir ah oo la hagaajiyay.
Xaqiijiyay: Apex Legends ayaa sidoo kale lagu bilaabi doonaa Android
Raadi wax badan oo ku saabsan xaqiijinta in Legend Apex uu yeelan doono nooc u gaar ah Android oo aan hadda lahayn taariikh sii deyn.
Google Play waxay kudareysaa "U hay fursadaha" xulashada bedelka saddexda dhibic ee taagan
Dukaanka Play wuxuu bilaabay inuu badalo qaabka faahfaahinta codsiyada ama ciyaaraha la heli karo loogu soo bandhigo daboolka arjiga.
Laga soo bilaabo abuuraha Belaayada Inc ayaa ka timaadda Rebel Inc.: Jooji kacdoonka ciyaar weyn oo istiraatiijiyad siyaasadeed / bulsho ah
Rebel Inc. waxaa soo saaray isla abuuraha 'Plague Inc', oo ah jilitaankaas oo aad ku abuuri lahayd virus si loo soo afjaro aadanaha oo dhan.
Final Blade, waa ficil weyn oo RPG ah oo leh daaweyn wacan oo muuqaal ah
Final Blade wuxuu ku siinayaa doorka badbaadinta Dunida Dhexe ee Princess Princess. Cinwaan tayo sare leh oo loogu talagalay Android dhammaan heerarka oo dhan.
Top Run: Retro Pixel Adventure si aad u xasuusato 80-meeyadii si deg deg ah oo aan joogsan
Top Run: Retro Pixel Adventure waa cinwaan tixraacyo badan ka sameeya aflaam badan iyo fanaaniintaas oo caan ku ahaa 80s.
Hada waad ku milmi kartaa xisaabaadkaaga Fortnite. Waxaan ku tusaynaa sida loo sameeyo
Kadib dhowr bilood oo sugitaan ah, Fortnite ayaa hada ku dhawaaqday inay horeyba u ogolaatay xogta in lagu wareejiyo inta udhaxeysa xisaabaadka Xbox iyo Nintendo Switch ee PS4 iyo tan kale.
Ku diyaari hamburgers-ka ugu macaan jikada Kawaii, oo ka cusub Cayaaraha Platonic
Kawaii Jikada waa kii ugu dambeeyay ee Cayaaraha Cayaaraha, istuudiyaha ciyaarta fiidiyowga ee Madrid kaasoo soo daayay ciyaaro tayo sare leh oo caan ah.
Ciyaaraha ugu fiican Dragon Ball ee loogu talagalay Android
Kala soo bax xulashadan cayaaraha ugu wanaagsan ee Kubbadda Cagta ee aan hadda ku jirno Android, oo laga heli karo Play Store.
Difaaca munaarad aad u cabsi badan oo leh Ghost Tower Defense
Haddii aad taageere u tahay difaaca munaaradda waxaad nasiib u leedahay Ghost Tower Defense, maadaama ay tahay mid si garaafiyan ah loo casriyeeyay maanta.
Ku billow nolol cusub jilitaanka BitLife
BitLife waa jilid nololeed kaas oo aad ku bilaabi doontid safarkaaga sidii ilmo yar oo aad ku dambayn doonto injineer software ah.
Revolve8 wuxuu udhaxeeyaa inuu noqdo cayaaryahan weyn oo khadka tooska ah uga socda SEGA a la Clash Royale
At Clash Royale yimaado Revolve8, cinwaanka cusub ee SEGA si uu u noqdo mid ka mid ah ciyaaraha sanadkan shaki la'aan.
Pokémon GO wuxuu soo bandhigayaa isbeddelada dagaalladii Tababaraha iyo Raid
Ka ogow wax badan oo ku saabsan hagaajinta lagu soo bandhigay dagaalladii tababaraha ee Pokémon GO cusbooneysiinteeda cusub, oo hadda socota.
Xbox Live waxaa laga heli doonaa Android bisha soo socota
Microsoft waxay sii deyn doontaa SDK oo u oggolaan doonta horumariyeyaasha inay ku daraan isdhexgalka nidaamka horumarka Xbox One.
Qaado ciyaartoy dheeri ah khadka tooska ah ee 'Tacticool', oo ah toogte isometric ah oo tayo leh oo aan la inkiri karin
Haddii aad rabto inaad ku xasuusato Counter Strike taleefankaaga gacanta ee 'Tacticool', waxaad ku heli doontaa wax aad u fudud mahadsanidiisa cayaaraha khadka tooska ah.
Gal goobta dagaalka ee ka dhanka ah ciyaartoy kale Wadada Awoodda: Dagaalkii Labaad ee Adduunka a la Clash Royale
Wadada Awoodda: Dagaalkii Labaad ee Adduunka waa cinwaan cusub oo loogu talagalay Android kaas oo gebi ahaanba dhiirrigeliyay Clash Royale oo loogu talagalay ciyaaraha khadka tooska ah ee 1V1.
Hexonia waa ciyaar istiraatiijiyad is weydaarsi weyn oo ku saleysan ilbaxnimo aadan seegi karin.
Hexonia waa ciyaar weyn oo istiraatiiji ah oo ku saleysan ilbaxnimo u timaadda Android si ay u bilaabaan qabsashada adduunka.
La dagaallamaan cayaartoyda kale dagaalka ku saleysan Mobster
Mafioso waa ciyaar bixisa wax badan oo tayo leh waxayna kuu kaxaynaysaa ciyaaro aad la ciyaarto ciyaartoy kale si aad u difaacdo maafiyada dunidan.
Dr. Mario World ayaa imanaya Android xagaagan
Ka dib markii la ogaaday in Mario Kart Tour dib loo dhigay xagaaga, warku wuu ka xanuun yaraanayaa midkan ku saabsan Dr. Mario World.
Mario Kart Tour oo loogu talagalay Android ayaa dib u dhigeysa daahfurka
Waxbadan ka ogow dib udhaca ku yimid daahfurka Mario Kart Tour oo Nintendo uu ku dhawaaqay iyo sababaha imaatinkiisa Android dib u dhac ku yimid.
Ka baxso xabsi ku yaal Escapists-ka Weyn 2: Jebinta Jeebka
Escapists 2: Jebinta Jeebka waa cinwaan istiraatiijiyad waqtiga-dhabta ah oo kuu geyn doonta 5 xabsi oo aad ka baxsan doontid.
Q12, Tartanka ku guuleysta Isbaanishka hadda wuxuu ku yaal Latin America # Q12Mex
Ka dib guushii weyneyd ee Q12 Trivia, hadda tartanka caanka ah wuxuu ku bilaabmayaa hal-abuurka Latin America oo leh barnaamijkiisa Q12 Mex.
Orod ayaa lagu sheegay bisadda caanka ah ee oranjiga ku leh Garfield Rush
Kama joojin doontid la socodka Garfield Rush, ciyaarta cusub ee ku saleysan dabeecadda caanka ah ee uu abuuray Jim Davis. Bilaash waad haysataa
Waxaan bilaabaynaa qayb cusub oo ku saabsan Androidsis, oo ah qayb fiidiyoow ah oo aan si joogto ah ugu cusbooneysiin doonno qodobkan si aan ugula talinno codsiyada ugu fiican ...
Fortnite mar horeba wuu la jaan qaadi karaa ilaaliyeyaasha Bluetooth wuxuuna noo ogolaanayaa inaan ku ciyaarno 60 fps
Ciyaaraha Epic-ka ayaa ugu dambeyn dhageystay bulshada ugu dambeyntiina waxay siinayaan iswaafajin ay la yeeshaan ilaaliyeyaasha bluetooth-ka nooca ay ku shaqeeyaan mobilada Android.
Tubada Captain Star waa dhag si aad u sahamiso 88 xiddigood iyo galaxyada oo dhan
Tap Captain Star waa guji madadaalo leh oo lagu sahaminayo ilaa 88 xiddigood, daraasiin adduunyo ah oo hoos u dhiga cadowyo fara badan.
U gudub sahaminta hawada si aad u qodato kheyraadka meeraha ee Idle Planet Miner
Idle Planet Miner waa ciyaar aad u baahan tahay inaad ku ballaadhiso ilahaaga macdanta adigoo sahaminaya meerayaal badan una diraya maraakiibta kheyraadka ku jira.
Waxaan ku tijaabinay qaabka quruxda badan ee zombie-ka ee 'Resident Evil' ee PUBG Mobile
Haddii aad rabto inaad ku hesho ciyaar kale isla PUBG Mobile, u diyaar garow qaabka cusub ee zombie-ka ee imaan doona maalmo. Waanu tijaabinay.
Tani waa waxa maqaarka gaarka ah ee Fortnite of the Honor View 20 u ekaan doono
Maamuusku wuxuu heshiis la galay Honor si loo soo saaro maqaar u gaar ah dhammaan isticmaaleyaasha iibsada Honor View 20
Caddaaladda Goobtu waa mid aad u qurux badan oo aad la ciyaarayso mid kale isla waqtigaas
Gudaha Caddaaladda (Space Justice) waxaad awoodi doontaa inaad la ciyaarto ciyaartoy kale si aad u baabi'iso cadowga guud ee labada doonaya inuu khatar geliyo galaxyada.
Shimbiro badan oo leh Shimbiro careysan oo riyadoodu Raadsan tahay a la Candy Crush Saga
Angry Birds Dream Blast waa ciyaar xujo cusub oo ka socota Rovio oo isku dayi doonta inay ku siiso qarax boqolaal xujooyin xiiso leh leh.
Rangers of Oblivion waa MMO dhab ah oo mobilkaaga oo kaliya rog
Rangers of Oblivion waxaa soo saaray Netease Games, isla kuwa masuulka ka ah nolosha siinta Diablo Immortal, oo bilo ka hor ay shaacisay Blizzard.
Dalagyada goosashada, xoolo korinta iyo sahaminta godadka Qube iska leh
Maalinta Hay waxay leedahay tartame weyn oo leh QubeTown, maadaama ay ficil ahaan u egtahay wax badan oo lamid ah. In kasta oo ay leedahay kala duwanaanshihiisa sidaad ku ogaan doontid.
Noqo qof dhab ah oo sifiican u yaqaana jidadka Beat Cop-ka weyn
Beat Cop wuxuu toos kuu geyn doonaa 80s si aad u ogaato sida loola dhaqmo taxane gaar ah oo jilayaal yaryar ah.
Abuur koox cajiib ah oo geesiyaal ah Fantasy been abuur ah, ciyaar aad u wanaagsan oo muuqaalkeeda ah
In kasta oo ay sidoo kale leedahay curyaamooyinkeeda, sida in dhamaadka aad u gudubto si aad ugu ciyaarto habka gacanta, Fantasy been abuur ah waa ciyaar ka buuxo wanaag.
Cusbooneysiinta PUBG Mobile-ka illaa 0.10.5 waxayna bilaabmaysaa xilli 5
PUBG Mobile waxaa loo cusbooneysiiyay nooca 0.10.5 oo leh qalab cusub, hub cusub iyo soo noqoshada codadka caadiga ah iyo kuwa cusub.
Roll Snow waa ciyaar iska caadi ah oo dhib badan leh taasina waxay caqabad ku noqon doontaa neerfahaaga
Halkan waxaan ku badaleynaa shimbiraha yar ee Flappy Bird oo loogu talagalay penguin aad u qosol badan oo ku socda baraf barafka ciyaarta loo yaqaan Snow Roll.
5 kulan oo bilaash ah oo Android ah oo aadan tabi karin
Soo ogow shantaan ciyaarood ee bilaashka ah ee bilaashka ah ee aad kala soo bixi karto taleefankaaga Android oo aad ugu raaxeysan karto dhammaadka toddobaadkan.
Golf Georgia waa ciyaar dib-u-dhac ah oo golf leh 18 godad ah oo lagu ciyaaro
Georgia Golf waxay leedahay laba nooc oo dhib ah, mid fudud bilowga ah iyo khabiir kale, oo loogu talagalay kuwa jecel jilitaanka.
Hang Line Adventure, cusub oo ka yimid Ciyaaraha Yodo1 si aad kor ugu hesho jillaab
Khadka Hang waa cinwaan cusub oo bilaash ah oo loogu talagalay Android kaas oo u taagan inuu kuu kaxeeyo buuro faro badan si aad u fuusho oo uu kuu tijaabiyo.
Ha uga tagin nalka nalka Hit the Light
In Light the Light waad joogi kartaa mid aad u raaxo badan ka dib markaad baabi'iso daaqadaha oo dhan oo ay ka buuxaan nalalka nalalka neon ee badan.
Afar kulan oo Android ah oo aan lahayn xiriir internet
Soo ogow xulkan afarta kulan ee weyn ee Android kuwaas oo aadan u baahnaan doonin xiriir internet si aad ugu ciyaarto.
Armello waa riwaayad aad u wanaagsan oo fantastik ah oo lagula ciyaaro saaxiibbadaada guriga
Raadi saaxiibo qaar oo ku raaxee ciyaar boodh weyn oo aad u baahan doonto inaad ogaato sida loo barto ilaa 3 qaabab ciyaareed oo kala duwan.
Feer nadiif ah oo leh Beat Revenge, a Arcade weyn oo dhiirrigelisay toogashada 'em ilaa 90s
Haddii aad rabto toogasho wanaagsan 'em up taas oo ku heesaysa heesta ugu fiican ee 90-meeyadii ee leh arcadesyadaas quraafaadka ah, Beat Street ayaa ku habboon.
Bandai Namco wuxuu dib u soo celiyaa halyeeyga leh Galaga Revenge
Galaga Revenge waa cinwaan xor ah oo bilaash ah oo Android kaa qaadaya geesaha meesha aad markabkaaga ku leedahay dhammaan ciyaarta arcade.
Iskuduwa laadhuuga si aad u noqotid saaxirka ugu awooda badan Dice Mage Online
Lahjadda Mage Online waa ciyaar laadhuush ah oo aan ku labbisano sidii saaxir si aan ula dagaallano ciyaartoyda kale khadka tooska ah.
Ha u oggolaan in gnomesku kaa xadaan digaaggaaga Dagaal Gnome More
Dagaal Gnome More waa ciyaar xiiso leh oo difaac ah oo loogu talagalay Android kaas oo aad ku yeelan doonto gunno badan oo isku dayaya inaad hesho digaaggaaga.
Baadh boqolaal godad oo ka adkaada boqorro xoog badan King Crusher kii weynaa
U diyaari kooxdaada dagaal ee ugufiican inaad wajahdo boqorrada iyo madaxda ugu dambeysa ee RPG loo yaqaan 'King Crusher' ee moobilkaaga Android.
Run Gun Die waa toogasho aragti isometric ah oo aad ka heli karto lamaanahaaga
Run Gun Die waa cinwaan bilaash ah oo loogu talagalay Android kaas oo kuu oggolaanaya inaad sahamiso godadka godka ugu dambayntiina aad hesho lamaanahaaga kaa sugaya inaad hesho iyada.
Candy Crush, Pokémon Go ama Clash Royale oo ka mid ah kulamada ugu badan ee soo xarooda 2018
Baro liiskan ciyaaraha leh dakhliga ugu badan suuqa 2018, oo aan ka helno dad badan oo naqaanno.
Outrush waa ciyaar iska caadi ah oo ay tahay inaad ku maamusho booskaaga
OutRush waa wax caadi ah oo dhameystiran oo aan waxba ka maqnayn. Xitaa waxay leedahay heerar gacanta lagu abuuray si aad qarax u yeelatid.
Sky Baron: Dagaalkii Qaramada Midoobay ee lagula diriray fool ka fool ka dhanka ah 4 ciyaartoy kale diyaaraddaada dagaalka
Bandhig farsamo oo weyn oo loogu talagalay Sky Baron: Dagaalkii Qaramada Midoobay. La dagaallama 4 ciyaartoy kale oo dagaal furan ku dhex socda duulimaadka.
Eternium, ama markay ARPG leedahay dhamaanteed taageerayaasha sheekada Diablo
Haddii aad raadineyso ARPG saacado badanna kaa horeeyaan, hadda waxaad dejin kartaa hadafkaaga si aad uga gudubto heerka 70 oo aad u gaarto heerka Champion. ARPG dhan
Ciyaaraha loogu tala galay Android ee 2019
Soo ogow kulamada aadka loo sugayo ee 2019 ee la filayo inay gaaraan telefoonada Android dabayaaqada sanadkan.
Fasax ku qaad taangi la yiraahdo Dagaal Weyn: Ka dib
Dagaal baaxad weyn: Ka dib waa cinwaan khadka tooska ah oo ciyaartoy badan leh oo leh taangiyo badan, helikobtarro iyo maraakiib dagaal oo loogu talagalay ciyaaraha 8v8.
Wadarta RPG si aad ula socoto raadadka uu uga tagay Diablo mobilkaaga Android
ToTAL RPG waa ciyaar bilaash ah oo loogu talagalay Android kaas oo aad ku ciyaari karto qad la'aan iyo awood la'aan. Waxaan ula jeedaa, wax walba adigaa iska leh.
Baadhitaanka godadka leh faraskaaga geesiga ah ee ku yaal Wil Knight
Wil Knight waa ciyaar xiiso leh oo caadi ah oo adeegsata sawir muuqaal ah oo muuqaal ah si loo dejiyo jawigaas mugdiga leh.
Light-It Up waa ciyaar caadi ah oo xiiso leh taas oo ay tahay inaad si aan dhammaad lahayn ugu dhex boodo sanduuqyada dhexdooda
Iftiiminta-Iftiinku waa mid madal aan caadi ahayn oo taabasho weyn ku leh sawirada iyo dhejiskaas oo aan joojin boodboodka markasta.
Waxaad ku jeclaan doontaa Jason qaybtan ka mid ah filimka naxdinta leh ee caanka ah ee loo yaqaan 'Friday the 13th: Killer Puzzle'
Jimcaha 13th: Halxiraalaha dilaaga ah waa xujo si fiican loo qabtay oo aad ku ogaan doontid sida xun ee Jason u sameynayay dilka dhibbanayaasha.
Ku noolow sida aad ugu badbaadi karto badbaado fiican 2D RPG oo la yiraahdo Ares virus
Fayraska Ares waa ciyaar aad u taxaddar badan, oo leh sheeko wanaagsan, muuqaallo aad u fiican, iyo waxyaabo badan oo lagu karsado, lagu abuuro daawooyin, iyo inbadan.
Laga soo bilaabo Bariga Fog ayaa ka yimaada Xeerka 'Alchemist Code', oo ka mid ah RPG-yada Aasiya ee 2018
Haddii aad raadineyso xamaasad, tacabir, manga, madadaalo, RPG, dagaal ku saleysan isweydaarsi, iskaashato wada shaqeyn badan iyo inbadan, halkaas waxaad ku leedahay Xeerka Alchemist.
Xidigaha Xiddigaha, Tilmaamaha iyo tabaha si aad ugu guuleysato dhamaan kulamadaada
Ma rabtaa inaad ku guuleysato ciyaaro badan kooxda Xiddigaha Brawl? Hagaag, waxaan ku baraynaa tabaha ugu fiican iyo tabaha lagu xaaqo fagaaraha ciyaarta caanka ah ee SuperCell.
Ciyaaraha ugu fiican Android ee 2018
Si loo sameeyo liistadan 15-ka kulan ee ugu wanaagsan Android waxaan ku tiirsannahay 3 dhinac: tayada farsamada ee aan la inkiri karin, oo lagu daabacay 2018 iyo noocyo noocyo ah.
Ku garaac meteorites gacmahaaga dusha bahalka xanaaqa Baba
Iyada oo careysan Baba waxaad ku dhowdahay inaad noqoto shaydaan mas'uul ka ah garaacida meteorites iyo taxane kale oo walxo ah oo loogu talagalay Android.
Xujo aan caadi ahayn oo ku jirta mobilkaaga gacanta oo wata Eeg korka Edge
Fiiri Edge waa ciyaar xujo aan caadi ahayn oo laga helo bilaash Google Play Store. 60 heer ayaa ku sugaya.
Turnscape wuxuu kugu qaadaa inaad sahamiso dusha sare ee meerayaasha badan oo leh xawaare aad u badan
Simpolemente waa mid heer sare ah oo muuqaal ah oo muuqaal muuqaal ah ciyaartan fiidiyowga ah ee loo yaqaan Turnscape iyo inaad horeyba uga heli jirtay Android maalmo.
Ficil duug ah oo casri ah 'em oo ay la socdaan Planetary Pew Force
Haddii aad taageere u tahay toogashada 'em up', Planetary Pew Force waa mid ka mid ah tixgelinta si aad ugu raaxeysato taleefankaaga gacanta ee leh muuqaalka dambe.
Dhamaan wararka Pokémon GO this Christmas
Soo ogow dhammaan wararka Pokémon GO, ciyaarta xiddiga Niantic, wuxuu naga tagayaa munaasabadda xafladaha Kirismaska. Hada la heli karo
Badbaadi adigoo ku boodaya si looga fogaado in lagaa dul maro Badbaada Wadada
Badbaadiyaha Wadada waa ciyaar cusub oo loogu talagalay Android oo leh qaab dib u habeyn ah iyo taxane ah astaamo aasaasi ah oo loogu talagalay dhammaan kuwa aan caadiga ahayn.
Hadda waad ka dhabeyn kartaa riyadaada oo waxaad siin kartaa adeegga ugu fiican muwaadiniinta ku jira Mini Hospital
Maamul cisbitaal iyo wax kasta oo la socda Mini Hospital, oo ah madadaalo loogu talagalay mobilkaaga Android-ka ah oo aadan tabi karin.
The RPG ugu daahir on Android ka halyeeyga Nightwinter halyeeyada: Hagaajiyay Edition
Nightwinter Night waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah cayaaraha doorka-ciyaarista ugu dhameystiran taariikhda ciyaarta fiidiyowga. Hadda waxaad ku haysataa moobilkaaga Android.
Darawalnimada Classics-ka Dugsiga waa jilitaan wadista dhabta ah ee mobilkaaga
Wadayaasha Classics School waa jilitaan wadista dhabta ah oo leh ku dhowaad 60 gawaari kala duwan. Waad wadi kartaa basaska, gawaarida isboortiga iyo waxyaabo kale oo badan.
Dhamaan taleefanada la jaan qaada Fortnite ee Android
Soo ogow liistada taleefoonada dhammeystiran ee u dhigma Fortnite ee loogu talagalay Android, marka lagu daro shuruudaha ciyaarta ka socota Ciyaaraha Epic.
Ku mashquul dhammaan dhismayaasha ciyaar madadaalo ah oo loo yaqaan Kaiju Rush
Kaiju Rush waa madadaalo aan caadi aheyn oo kaa xiidi doonta kulamadii ugu horreeyay. Farshaxanka Pixel dhammaan nuxurkiisa ciyaarta bilaashka ah.
Kuwani waa barnaamijyada iyo ciyaaraha soo saaray lacagta ugu badan sanadka 2018
Kuwani waa barnaamijyada iyo ciyaaraha soo saaray lacagta ugu badan ee 2018. Soo ogow barnaamijyada soo saaray lacagta ugu badan.
Hadiyadaha Kirismaska ​​ee ugu Fiican: Deluxe loogu talagalay Lemmings for Android!
Marka, haa, si wanaagsan ayey ku dhammaan kartaa sannadkan: Lemmings on Android. Nooc weyn oo ka buuxa raaxo iyo si fiican loogu talagalay moobiilka.
Beach Buggy Racing 2, waa ciyaar karting dhan ah oo aad ugu raaxeysan karto si buuxda
Gudaha Beach Buggy Racing 2 waxba ugama hadhin dhuumaha si aan ugu raaxeysano qaddarkooda badan ee ka kooban nooc kasta.
Fortnite wuxuu si rasmi ah u gaarayaa heerka dhexe ee Android
Ka ogow wax badan oo ku saabsan imaatinka Fortnite illaa bartamaha dhexe ee Android mahadnaqa nooca cusub ee ciyaarta ee Ciyaaraha Epic ee hadda la heli karo.
Ka caawi Mavis, Hank ama Wendy hudheelka Transylvania Adventure, ciyaar sifiican loo qabtay
Hoteelka Adventure ee Transylvania waa qadiim weyn, in kasta oo ay ku celceliso isla qaabka ay ku shaqeeyaan barnaamijyo kale oo badan oo laga helo Android.
PUBG Mobile waxaa lagu cusbooneysiiyay khariidada cusub ee Vikendi, baabuur baraf leh iyo waxyaabo kaloo badan
Ilaa Diseembar 20, khariidadda cusub ee Vikendi laguma soo dejin karo PUBG Mobile. Maalin ka dib waxaad awoodi doontaa inaad ku ciyaarto taleefankaaga gacanta.
Ku burburi magaalada oo dhan xayawaankaaga duurjoogta ah Waxaan ahay Bahal
Anigu waxaan ahay 'Monster' waa wax sifiican loo fuliyay oo aad ku hagaajin karto wuxuushkiisa si aysan uga tagin boombarooyin madax la'aan.
Pro Evolution Soccer 2019 wuxuu si rasmi ah ugu yimid Android
Ka ogow wax badan oo ku saabsan imaatinka qaybta cusub ee Pro Evolution Soccer ee qalabka Android. Waxay ku timaadaa qaab cusbooneysiin ah.
Dagaallada Caanka ah waa nooc "IO" nuuca ciyaarta ah ee ciyaartoy badan oo ay tahay inaad ka hesho tirada ugu badan ee raacsan inay ku raacaan.
Dragon's Watch waxaa soo saaray isla dadka ka shaqeynaya barnaamijka Android iyo iOS ee Stardew Valley, ciyaarta beeraha.
Ciyaaraha ugu wanaagsan ee Supercell ee loogu talagalay Android
Raadi wax badan oo ku saabsan ciyaaraha ugu fiican ee aan ka heli karno Android oo ay soo saartay Supercell. Waxaa laga heli karaa Play Store.
Dullaaliyeyaasha Dhimashada waxay ku riixaysaa ficil cajiib ah xadka dagaalka RPG
Dullaaliyeyaasha Dhimashada ayaa awood noo leh inay na geyn karaan muuqaal muuqaal heer sare ah oo loogu talagalay waxqabadka bilaashka ah ee 'RPG' ee moobiilkaaga Android.
Ego Espada waa gujiye kaa dhigaya inaad ku xirnaato muddo dheer, waqti dheer
Waxyaabo badan oo furaha ayaa kugu sugaya Ego Espada, dhag-garaac kaas oo ku guuleysanayay Google Play Store muddo toddobaadyo ah oo aad bilaash ku haysatid.
Munchkin.io waa nooc dagaal oo nooca io ah kaas oo aad ku isticmaasho hubka noocyadiisa kala duwan
Munchkin.io waa royale dagaal oo horey usbuucyo kahor looga bilaabay Android kaas oo runtii aad ugu raaxeysan karto dagaaladaaga ciyaartoyda kale.
Ciyaaraha ugu fiican ee Nintendo ee loogu talagalay Android
Kala soo bax xulashadan cayaaraha ugu wanaagsan ee Nintendo ee aan hadda ugu diyaar nahay taleefannada Android.
Dagaalada Tababaraha ee Imaanaya Pokémon GO
Ka ogow wax badan oo ku saabsan dagaalladii tababaraha ee si rasmi ah u yimid Pokémon GO oo leh cusbooneysiinteeda cusub. Hada la heli karo
Xiddig ayaa ku dhashay aaladda 'Super Fowlst rigs'
Iyada oo laxanka badan, naqshadeynta dabeecad wanaagsan, heerar wanaagsan iyo tayo farsamo oo aad u wanaagsan waxaan leenahay ciyaartan weyn ee loo yaqaan Super Fowlst.
Minecraft wuxuu gaaraa nooca 1.8 oo leh baandooyinka iyo bisadaha sida sheekooyinka ugu waaweyn
Cusbooneysiinta Minecraft ee muddada dheer la sugayay ee bisadaha iyo baandooyinka ciyaarta ku daraysa ayaa hadda laga heli karaa Android Play Store.
Ciyaaraha ugu fiican ee Warner Bros ee loogu talagalay Android
Kala soo bax xulashadan cayaaraha ugu fiican ee Warner Bros uu u sii daayay ilaa hadda aaladaha Android. Dhammaan waa la heli karaa hadda.
Super Cell's Brawls Stars ayaa haatan soo baxay, Hit kale oo weyn sida Clash Royale iyo Clash of Clans?
Supercell ayaa ugu dambayntii sii daayay Android kulankeeda cusub ee loo yaqaan 'Brawl Stars', ciyaar badan oo PvP ah oo loogu talagalay 3v3 kulan.
Allabaryo waa in la sameeyaa, ama markay wax yar oo naxariis daro ah waxyeello gaarin
Allabaryo waa in la sameeyaa waa ciyaar iska caadi ah oo ay tahay inaad ku badbaadiso wanaagga, halka kuwa quduusiinta ah lagu hor huri doono horteenna.
Ciyaaraha ugu wanaagsan ee Noodlecake Studios ee loogu talagalay Android
Kala soo bax xulashadan cayaaraha ugu wanaagsan ee Noodlecake Studios ee aan hadda ka helno Android.
Redneck Rush waa orodyahan aan dhammaad lahayn oo adeegsada fiisigiska walxaha fiican
Redneck Rush waa orod aan dhammaad lahayn oo ay tahay inaad iska ilaaliso wax kasta oo ay tahay duufaan weyn oo ku raadinaysa rajo la'aan.
Ciyaaraha ugu fiican EA ee loogu talagalay Android
Kala soo bax xulashadan cayaaraha ugu fiican ee EA (Farshaxanka Elektiroonigga ah) ee aan hadda ka helno Android.
Samsung ayaa bilaabi doonta maqaarro cusub oo gaar u gaar ah oo loogu talagalay Fortnite
Samsung waxay leedahay waxyaabo badan oo kadis ah oo loogu talagalay dhammaan dadka isticmaala ee iibsada ama iibsada Galaxy Note 9 oo ah qaab maqaar cusub
Ciyaaraha Ubisoft ee ugu wanaagsan Android
Kala soo bax xulashadan ciyaaraha ugu fiican ee ay abuurtay Ubisoft oo aan hadda diyaar ugu nahay taleefannada Android.
Sida looga hortago in toobiye laga abuuro shaashadda guriga ee codsiyada ama ciyaaraha aan rakibno
Haddii aan ka daalnay inaan aragno sida mar kasta oo aan uga soo rakibo codsi ka socda Dukaanka Play-ka ay noo abuureyso waddo gaaban, waxaan ku tusi doonaa sida looga fogaado.
Ilaaliyayaasha Videogame waxay ku ammaanaan halyeeyada ciyaarta fiidiyowga oo ay ku dheelaan gameplay fudud
Ilaaliyeyaasha Videogame waa ciyaar gujis RPG aan firfircooneyn taas oo aan ku horumarin doonno ilaaliyeyaasheena, shaqaaleysiin doono wax badan oo aan adduunka ka adkaanno.